Arịrịọ na ozi | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
Foto na vidiyo na mmemme pụrụ iche na ụlọ akwụkwọ
Anyị ji gị kpọrọ ihe ị bịara ịkwado na ịkekọrịta ihe omume pụrụ iche dịka mgbakọ, ihe ngosi wdg yana nwa gị, mana biko ga-arịọ ka ị were foto / vidiyo nke nwa gị, ebe ụfọdụ ụmụaka enweghị ikike maka iji ụlọ akwụkwọ eme ihe foto ha.
Biko kpachapụkwa anya mgbe ị na-etinye foto / vidiyo na mgbasa ozi mmekọrịta, naanị ị nwere ike ime nke a maka nwa gị.
Uwe na onyinye afọ ofufo
Biko gbaa mbọ hụ na uwe nwa gị niile akara akara. Anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị ghara ịgwakọta uwe, mana ọ ga-aba uru ma ọ bụrụ na akpọrọ ha aha. Ọ ga-enye aka ma ọ bụrụ na ị ga-eziga nwa gị plimsole maka uwe ọzọ ka ọ bụrụ akpụkpọ ụkwụ ha n'èzí ma ọ bụrụ na mmiri ma ọ bụ apịtị dị na ama egwuregwu. Anyị nwere ekele maka onyinye afọ ofufo maka nri nri, isi nri, nleta mmụta wdg.
Dika anyi bu ndi otu akwukwo akwukwo na akwukwo nri, anyi n’enye umu aka nri di nma. Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri nwere ike ịbụ ihe dị ọcha iji mee smoothies / juices, sie ma ọ bụ rie raw. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ka anyị nye nwa gị nri pụrụ iche, ma ọ bụ chọọ iziga ihe, biko gwaa onye nkuzi klas gị. Anyị nwekwara ike ịnye mmiri ara ehi dị ka nhọrọ ọ aụ drinkụ n'ụlọ akwụkwọ.
Biko mara na anyị enweghị mkpụrụ n’ụlọ akwụkwọ maka ụmụaka ọbụla, yabụ biko kpachara anya ma ọ bụrụ na ị zigara nri na mkpụrụ.
Dilọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ
Biko mee akara n'igbe dị n'akụkụ ozi ahụ ka anyị wee mara na agụwo ya.
Ndị nkuzi email
Ọ bụ ezie na anyị nwere obi ụtọ dị ukwuu maka ndị nne na nna / ndị nlekọta ka ha na ndị nkuzi kpọtụrụ site na email, biko mara na ọtụtụ ndị nkuzi nọ na klaasị oge niile, ma nwee obere oge iji nweta ozi ịntanetị ha. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgwa onye nkuzi nwa gị okwu ọsọ ọsọ ma ọ bụ ọ bụrụ na okwu ahụ na-ada, biko dee n’edetu nwa gị / ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ hapụ ha ozi ekwentị na ụlọ akwụkwọ.
Nwa gị nwere Kaadị-Oge Kaadị Akwụkwọ. Ndị a bụ maka gị na ndị ọrụ klas gị ka ị na-ekwu okwu ma na-edekọ ihe na 10 sekọnd ka nwa gị nwee ike ịkekọrịta ozi ha. Kaadị ndị a bụ ederede / ehichapụ (biko jiri mkpịsị odee edepụtara), gbakwunye na enwere akpa plastik doro anya iji tinye foto nke gị.
Biko jiri ihe ndị a oge niile i nwere ike, ma cheta idowe ya n’akpa nwa gị ka ọ dịrị anyị ka anyị dekọọ ozi n’ụlọ. Nke a bụ na mgbakwunye na akwụkwọ nwa / ụlọ akwụkwọ nwa gị.
Anyị nwere ndị na-ebu ngwaahịa maka ụmụaka ndị chọrọ iyi ha na ọdọ mmiri, ma ọ bụ n'ọdọ mmiri ọha mgbe ha na-egwu mmiri. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịtụ otu maka ojiji na mpụga akwụkwọ, biko kpọtụrụ Alison Rees n'ụlọ akwụkwọ. Ọ bụrụ na nwa gị chọrọ ebe a na-egwu mmiri, ị ga-enweta leta na-arịọ ka a kwụọ ụgwọ maka ya.
Kama ka nwa gị ghara ịhapụ mmiri ọgwụ ha ma ọ bụ oge igwu mmiri, ọ bụrụ na anyị nwere nke nwere nke nwata ọzọ tolitere, anyị ga-eji ya maka nwa gị. Biko mee ka anyị mata ma ọ bụrụ na ị ga - ahọrọ ka anyị ghara ime nke ahụ.
Ogige ụgbọ ala mbụ na njedebe nke ụgbọala anyị bụ nke Medical Practice, na oghere bụ maka ndị ọrụ ha naanị. Debe n ’ụgbọala anyị na-akwụsị akwụsị. E nwere oghere maka ndị nne na nna / ndị nlekọta ịhapụ ụmụ ha mana ọ gaghị anọ ogologo oge maka nzukọ wdg. Anyị ga-agba gị ume ka ị wepụ ụgbọala gị ozugbo.
Nleta Homelọ na Okwu Nlekọta Asụsụ na Nleta
Ndị okwu anyị na ndị na-agwọ asụsụ na-achọsi ike ime nleta ụlọ n'oge ezumike ụlọ akwụkwọ, iji kwadoo gị n'ịmepụta mmemme iji n'ụlọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka otu n’ime ha kpọtụrụ gị maka nke a, biko gwa onye nkuzi klas gị ka o nyefee ha nkọwa gị ma ọ bụ kpọọ ha na 020 8361 1993.